kwi-salome kunye nokuqhotswa - I-Airbnb
kwi-salome kunye nokuqhotswa
Ingolsheim, Grand Est, France
Indlu enamaplanga ayi-1795 ekufutshane neWissembourg kunye ne hunspach, inqaba yaseSchoenburg ikude ngeekhilomitha eziyi-2. Ukulandelelana kweenkwenkwezi eziyi-3 yi-adt.possbility yemililo ye-pie
Iilali zaseWissembourg Country
Hunspach, Drachenbronn, Birlenbach, Schleithal, Bremmelbach, Ingolsheim, Niederseebach Hlola iilali ezintle zendawo yezolimo, ihlabathi lasemaphandleni liyakuvulela uze wabelane nawe nge- joie de vivre.
I-Pays de Wissembourg yindawo entle esezilalini zase-Alsace. Qiniseka ukuba udlula kwiilali ezinomtsalane zesidiliya, i-Ingolsheim kunye neefama zayo zenkulungwane ye-19 ngaphambi kokuya e-Hunspach nase Seebach. Emva koko uhambe kwindlela yakho ukuya eSchleithal, kwilali ende yesitrato saseAlsace, emva koko uDrachenbronn noBirlenbach ukuya eSchoenburg. Ngaphambili komgca we-Maginot, ezi dolophana zokugqibela zisindiswe yiMfazwe Yehlabathi Yesibini, ziye zagcina iimpawu zesintu kunye nezindlu ezakhiwe ngamaplanga ukususela ngenkulungwane ye-18 ukuya kweye-19.
Ilapha kwi-Outre-Forêt apho intliziyo yeAlsace ibetha khona, kunye namasiko ayo, iinkolelo kunye nemizobo esasetyenziswa kakhulu, ngokukodwa kwimidlalo yeqonga ye-Alsatian.
I-Outre-Forêt lilizwe leedolophana ezintle. Enye yezona dolophana zintle eFransi, iHunspach kunye neSonbach zidume ngezindlu zabo ezinamaplanga amhlophe, ezinemiqolomba, iifestile ezirawundi… zigcinwe kwaye zinentyatyambo. Eyona mpahla intle e-Alsace ise Seebach, ngokukodwa ngosuku lomtshato owakhiwe ngokutsha we- 'Streisselhochzeit' ngoJulayi. Nangona kunjalo, akuqhelekanga ukubona izinto zale mpahla zinxitywe ngabanye abantu basekuhlaleni yonke imihla kwiiyadi zasefama okanye ngeeCawa esitratweni.
boulanger de métier , j'aime faire de la tarte flambé et cuir du pain au feu de bois j'aime le travail et se qui suit après le repos avec une bonne bière
Inombolo yomthetho: CPW84HTL
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ingolsheim